Ibhlog | WOWOW iiFaucets
Amagumbi okuhlambela anokuhlaziywa !!! Igumbi lokuhlambela Abantu bayokwazi
2021 / 01 / 11 7969
Igumbi lokuhlambela iSikolo seShishini i-2020-11-27 Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi, ngokuqinisekileyo yeyona ndawo isetyenziswa kakhulu ekhaya. Ngokuthethileyo, igumbi lokuhlambela yindawo enzima ngakumbi. Kwaye umhombiso unyanzelekile ...
Uxolo, indlu yangasese inayo le ngxaki, hayi iingxaki zomgangatho!
2020 / 12 / 12 6990
Isikolo seshishini lokuhlambela Ukuthenga indlu akukho lula kubathengi abaninzi, kwaye ukulungiswa akukho lula kwaphela, kwaye bonwabile ukungena! Kodwa izalamane nabahlobo bathi indlela yakho yangasese eqhekeka ngayo ...
Emva kokubona uyilo oluphindiweyo lweSink Kwikhaya Lomnye Umntu, Ndandinomona!
2020 / 12 / 12 6023
Ou Xiaowei Igumbi lokuhlambela iSikolo seShishini Kwasa ekuseni kwaye ungxamile Zonke iintlobo zokuphazamiseka ~ ~~ xa ucudisa ukuhlamba nokuhlamba amazinyo. Ngaba ukhe walufumana olu hlobo lwenkathazo ...
Igumbi lokuhlambela lisebenzisa iglasi ukwahlula umanzi emanzini, nto leyo eqaqambile kwaye iphangalele
2020 / 12 / 05 7287
Isikolo soShishino lwegumbi lokuhlambela Igumbi lokuhlambela lingahlulwa libe yindawo yeshawa, indawo yangasese kunye nendawo yokuzilungisa ngokwemisebenzi yabo. Indawo yokuhlambela kuphela eyona ifumileyo, ke kunyanzelekile ...
Yeyiphi eyona Faucet ilungileyo yeSinki?
2020 / 12 / 03 6025
Impompo esemgangathweni akufuneki ukuba yomelele kakhulu kwaye ibe lula ukuyicoca, kodwa intle kwaye iyasebenza. Ezi faucets zilapha ekhitshini zilandelayo zibonisa izinto ezintsha kunye nokugqiba okuhle ...
Yeyiphi eyona Bhendi yeKhofi yaseBitchen?
2020 / 12 / 03 5311
Ezinye zeempawu ezaziwayo nezinexabiso eliphantsi kwiAmazon: WOWOW, Ufaucet, KINGO HOME Ezinye iipompo zasekhitshini ezithandwayo: Moen, Delta, American Standard, Kohler, Kraus Kwindawo yentengiso, iifomfucu zinexabiso ...
2020 / 11 / 09 5990
Nokuba uthatha indawo okanye ufaka itepu yasekhitshini, kuya kufuneka uhambe phantse kwinkqubo enye. Nangona ukufaka itepu ekhitshini kulula ngandlela thile kunokuyitshintsha. Kodwa, endaweni yekhitshi f ...
2020 / 11 / 09 6055
Kunzima ukuyibona into oyiphosileyo de uphendukele kwenye yeefompu zasekhitshini eziphambili. Zininzi iindidi, ukusuka ekusebenziseni ukuchukumisa ukuya kwiifomet zenzwa yokuhamba. Ungafumana ...
2020 / 11 / 08 7053
Uninzi lwabantu, ikhitshi ayisiyondawo yokupheka kuphela. Kwinyani sisebenzisa iikhikhini zethu zokuphumla, ukuxubana, ukucinga. Iikhikhini zangoku zilungelelaniswe njenge ...
2020 / 11 / 02 5442
Ngaba ufuna ukufumana eyona faucet yasekhitshini isemgangathweni? Ewe, ukuba ujonge ukufumana ukhetho oluthembekileyo, kuya kufuneka uqale uphando lwakho kwaye uhambe ngeenkcukacha eziza kukuvumela ...
Ingxelo ye-2020 yaseMelika yokuHamba kweGumbi lokuhlambela: Izindlu zangasese eziSmart, ii-Faucets zeSensor, kunye neKhabinethi yoKuhlambela yangasese iya kuduma!
2020 / 11 / 02 5688
Ikhitshi kunye neBhafu. Ikhitshi kunye nezihloko zeBhafu. I-HOUZZ, iwebhusayithi yeenkonzo zasekhaya zase-US, ikhupha isifundo sonyaka seendlela zokuhlambela zase-US, kwaye ushicilelo luka-2020 lwengxelo lukhutshiwe ekugqibeleni. T...
2020 / 11 / 01 5092
Ikhitshi kunye neBhati. Iintloko zekhitshi kunye neBhafu. Nge-22 ka-Okthobha, i-NASA yabhengeza iziphumo zolu khuphiswano, nezakhokelela ekukhetheni "izindlu zangasese zenyanga" ezintathu, kunye nep ...